Diapers - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा पोषण र केयर डायपर
डायपर - त्यसैले तपाईंको सानो प्रेमी सुकाइन्छ
बच्चाको जन्म प्रायः मानिसहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम आनन्द हो। बच्चा सम्भव भएसम्म दैनिक जीवन बनाउनको लागि, छनोट सही छ डायपर महत्वपूर्ण। राम्रो बैठक डायपर स्वास्थ्य र आफ्नो सानो खजाना को उचित हेरविचार को बारे मा धेरै लाभ प्रदान। तर केले उत्तम डायपर बनाउँछ?
डायपर तपाईंको बच्चालाई आचरणको पर्याप्त स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ, धेरै सशक्त शक्ति गुमाउनु हुँदैन र सकेसम्म चाँडै आकर्षित गर्नु पर्दछ। केवल यस तरिकामा तपाईं र तिम्रो बच्चा तिनीहरूको साथ खुसी रहनेछन् र अप्रिय रूपमा पहने वा पहने महसुस गर्नुहुन्न।
डायपर विभिन्न आकारहरु र डिजाइनहरु को रूप मा उपलब्ध छ र यहां सम्म कि यदि शिशुहरु र toddlers को लागि ज्यादातर मामलाहरु मा खरीदा हो, हाल को वर्ष मा वयस्क डायपर को बजार पनि बढेको छ। आमाबाबु हो, तथापि, नग्नहरूको खरीदमा अझै पनि मुख्य लक्ष्य समूह हो। यो पनि5र 10 को बीच एक बच्चाको औसत विचार गर्दा केही आश्चर्यजनक छ डायपर दिनमा। त्यसोभए, प्रायजसो परिवारले दिन्छन् डायपर औसत मा 1.000 र 2.000 यूरो को बीच मा। प्रायः परिवर्तनको मात्र डायपर अर्थात्, पुनरुत्थान र अशुद्ध छाला इलाकाहरूलाई रोक्न सकिन्छ। साथै, अधिकांश शिशुहरू धेरै असुविधाजनक हुन्छन् जब डायपर भिज्याउँछ।
वास्तवमा, डिस्पोजेबल डायपर केवल 1960 वर्ष पछि व्यावसायिक रूपमा मात्र उपलब्ध छ। त्यसपछि सम्म, कपडा जुत्ताहरू सुत्ने को लागी एकमात्र तरिका हो। डिस्पोजेबल डायपरको आविष्कार गर्दा, कपडा संस्करणको समय अस्थायी रूपमा पूर्ण थियो, किनकि यी हो भने, अधिक व्यावहारिक र हातको पालोमा लागू गर्न सकिन्छ। यो केवल पर्यावरण प्रदूषणको बढ्दो समस्याको कारण मात्र थियो कि कपडा डायपरको मुद्दा अझ बढी भयो। धेरै आमाबाबु अझै पनि डिस्पोजेबल डायपर पुग्छन्, जुन अब आमाबाबुको आवश्यकताहरु र सबै भन्दा माथि पनि बच्चाहरु वा बच्चाहरु लाई अनुकूलित छ। कुनै पनि उद्देश्य उद्देश्य एक डायपर आवश्यक छ, तपाईं खुदरा मा उत्तम उत्पादन पाउनुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं अझै पनि डायपरको खरिदमा के महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर थाहा छ, त्यहाँ के फरक छन् र कसरी डायपर हामीले तपाईंको लागि एक डायपर तुलना गर्यौं। यो तपाईंको लागि सही छनौट हो।
एक-तरिका वा तपाईं बहु-डाइरेक्ट डायपर चाहनुहुन्छ?
विभिन्न छनौट चयन डायपर प्रायः युवा आमाबाबु सामान्यतया आश्चर्यचकित हुन्छन् र यसैले खरीद निर्णय अधिक गाह्रो बनाइन्छ। यसले तपाईंलाई डिस्पोजेबल डायपर र पुन: प्रयोज्य डायपर बीच छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। एक-डाइरेक्ट डायपरले यस तथ्यलाई फरक पार्दछ कि अवशोषित शरीरमा यो समावेश हुन्छ एक लुगा हो जसले द्रव र तरल अवशोषित गर्दछ। अवशोषण शरीर घटेको प्लास्टिकको आवरणले यो कुरा निश्चित गर्दछ कि केही पनि छैन, तर तरल पदार्थलाई गाँसिएको छ र तपाईंको बच्चा आरामको लागी जारी राख्छ। त्यसपछि डायपर केवल कचरामा फेंकिएको छ र एउटा नयाँ डिस्पोजेबल डायपर प्रयोग गरिन्छ। एक-तरङ्ग डायपर बस डायपरमा गोंद जेबहरूको सहायता संग बन्द हुन्छ। यो संस्करण प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र तपाईंको बच्चाले राम्रो तरिकाले फिटिंग डिस्पोजेबल डायपरमा सहज महसुस गर्नेछ किनभने उच्च-गुणस्तरका उत्पादनहरूमा उत्कृष्ट स्यासन पावर छ। यसबाहेक, तपाईंको बच्चाले यो डायपर संग अचम्म लाग्न सक्छ र कपडाको छेउमा पित्त कपडाको कारण लगभग अदृश्य हुन्छ।
मल्टी-डाइरेक्ट डायपरको अवस्थामा, यो फरक देखिन्छ। यो एउटा कपडा हो जुन साधारणतया धुश्री मेनुमा धोइन्छ र यसैले फेरि फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक अवशोषण सामाग्री पनि कपडा डायपरमा राखिएको छ, जसले कुनै गल्ती गर्दैन। यो प्रकार धेरै पटक धेरै अधिकृत छ, तर अधिकतर प्रायः आमाबाबुले चुनेका छन्, किनकि यो सामान्यतया सस्ता र कथित रूपमा अधिक अनुकूलन हो। यो साँचो होइन, तथापि, एक अत्यन्तै उच्च पानीको कारण र बिजुलीको खपत अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ।
बेबी [डायपर किन्नुहोस् - तपाईलाई यो ध्यान दिनुपर्छ
सही साइज पत्ता लगाउनुहोस्
बच्चाहरु राम्रो संग फिटिंग संग डायपर खुसी छोराछोरीहरू हुन् र आमाबाबु सामान्यतया खुसी हुन्छन् यदि डायपरले फिट हुन्छ र तरल यसरी डायपरमा सुरक्षित रहन्छ। सही साइज छनौट गर्न सजिलो छैन, र तपाइँ विभिन्न प्रकारका मोडेलहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतया डायपर आकार बच्चाको आकार र यसको वजनमा निर्भर गर्दछ। नवजातको लागि, आकार 1 सामान्यतया सही छनौट हो। यद्यपि, यदि तपाईंको बच्चा धेरै चाँडै जन्मिएको छ भने, यसले यो हुन सक्छ डायपर पहिले नै ठूलो छ र यो समयमै बच्चाहरु को लागि एक विशेष डायपर को आवश्यकता हो। 1 साइज 2,5 किलोग्रामको शरीरको वजनबाट उपयुक्त हुन्छ र पाँच किलोग्रामको वजन पनि पहन सक्छ। त्यसपछि तपाई डायपरको ठूलो संस्करणमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ, आकार6ले बच्चाहरूको डायपरको लागि अधिकतम बृद्धि गर्दछ। यो 30 किलोको बच्चामा पनि सुरक्षित छ। तथापि, धेरै आमाबाबु अझै सही डायपर आकार द्वारा डूबिएको छ किनभने तिनीहरू निर्माताको अनुसार भिन्न हुन्छन् र कुनै सामान्य मानकीकरणको अवस्थित छैन। यदि एक बच्चाको डायपर ठीकसँग फिट छैन र / वा चाँडै चल्छ, तपाइँ अर्को उत्पादनको खोजी गर्नुपर्छ। धेरै उत्पादकहरूले तपाईलाई सही उत्पादन छनौट गर्न मद्दत गर्न साना नमूना प्याकहरू प्रस्ताव गर्दछ। सधैं ध्यान राख्नुहोस् कि पेट मा डायपर धेरै टाढा वा धेरै तंग हुँदैन र तपाईंको बच्चालाई आराम गर्दछ। यदि डायपर सजिलैसँग राम्ररी बन्द गर्न सक्दैन, तपाईले अर्को डायपर साइज प्रयोग गर्नुपर्दछ।
एक पटक डायपर निर्मातामा निर्णय भएपछि, तपाईंलाई तुरुन्तै सूचना दिइनेछ यदि यसले तपाईंलाई सहनशीलताको बारेमा पनि विश्वस्त हुन सक्छ। चूंकि डायपर डायपर मा चाँडै थोडा गीला को पा सकते हो, यो महत्वपूर्ण छ कि चिपकने वाला स्ट्रिप्स तुरुन्तै असफल छैन र डायपर तल पर्ची। विशेष गरी राति, यो विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तपाईंको बच्चाले अन्यथा सुत्न सक्दैन र तिनीहरू दुबै भन्दा बढी फेरिएको हुन्छ भन्दा वास्तवमा आवश्यक छ। हाम्रो डायपर तुलनामा, तथापि, हामीले धेरै पाए डायपर, जब यो स्थायित्व आउँछ, बिल्कुल सन्तुष्ट हुन्छ।
डायपर डायपर आस्तीन वा सट्टा पट्टाको छनौट?
सही डायपर चयन गर्दा, एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्पष्ट छ, अर्थात्, तपाईं र तपाइँको बच्चा मोडेल डायपर प्यानलाई राम्रो छनौट गर्न वा तपाईं डायपर पर्चीको लागि छनौट गर्नुपर्छ। दुई को अधिक सामान्य संस्करण डायपर हुन्। यी तथ्यहरू यसका विशेषता हुन् कि तिनीहरूसँग वेल्क्रो फास्टनर छ र पेट भन्दा बाहिर जान्छन्। डायपर पर्चीले किनारमा वेगको बन्दरगाह छ र छिटो र सजिलै खिच्न सकिन्छ। ठूलो फाइदा यो छ कि तपाइँ खडा हुँदा डायपर पर्ची राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी एक बर्षदेखि बच्चाहरु, जो पहिले देखि नै टाढो मा सुकेको सुन्तला मा स्थित छन् यो आदर्श हो। यद्यपि, उनीहरूमा पनि ठूलो कमी आएको छ जसले धेरै आमाबुबाहरूलाई उनीहरूको खरिद गर्न र मूल्यमा देखाएको छ। Windelslips Windelhöchenchen - Variante भन्दा धेरै महान् छन्।
डायपर मोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
सुरुमा, नयाँ आमाबाबुको लागि डायपर परिवर्तन गर्नाले सामान्यतया ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। तथापि, केहि अभ्यासका साथ, यो सामान्यतया आफैले गर्न सकिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको परिवर्तन तालिका पर्याप्त ठूलो छ र बच्चा बिरालो हुन सक्दैन जब यो अचानक सिक्न जान्छ। यो प्रायः प्राय: प्रायः एकअब्युरक्षित दोस्रो हुन्छ। यसको अतिरिक्त, यो एक ठूलो फायदा हो यदि तपाईं प्रयोग को लागि तैयार डायपर को बदलन को लागि सबै आवश्यक बर्तन छ र तपाईंलाई बदलन तालिका को हटाउन को लागि छैन, उदाहरण को लागि, ताजा डायपर प्राप्त गर्न को लागि। यी सुझावहरूका साथ तपाईं द्रुत रूप परिवर्तन गर्न छिट्टै एक पेशेवर बन्न सक्नुहुनेछ।
मर्छु डायपर तुलनामा
प्याम्पर्स सक्रिय फिट डायपर मासिक बक्स, आकार 4, ...
प्याम्पर्स बेबी-ड्राई आकार २, dia2डायपर प्रदर्शन
समय र फेरि, Stiftung वारेंटेस्ट वा ओको-टेस्ट जस्ता गम्भीर कम्पनीहरू डायपर टेस्टहरू चलाउँछन् र उनीहरूको अवशोषणका लागि उनीहरूको खोजी गर्छन्, सान्त्वना र उपयोगको सजिलो पहल गर्छन्। को डायपर सामान्यतया धेरै 100 आमाबाबुले लामो समयको अवधिमा परीक्षण गरेका हुन्छन्। कम्पनी Pampers लाई प्रायः तुलनात्मक विजेता भनिन्छ। सबै भन्दा माथि, डायपर सक्रिय फिटले सधैं पूर्ण शीर्ष मूल्याङ्कन प्राप्त गर्दछ र पछिल्लो पङ्क्तिहरूमा अन्य उत्पादनहरू बुझाउँछ। बच्चाहरु पिपार्स बेबी-ड्राई पनि धेरै लोकप्रिय छन् र धेरै बच्चाहरु को धेरै आमाबाबु को लागि रोजमर्राको जीवन को लागि एक महान राहत हो। जब तपाईंको बच्चाहरु को आवश्यकताहरु को लागि एकदम सही डायपर को लागी, यो एक राम्रो विचार हो कि अरु को राय साझा गर्न पनि एक राम्रो विचार हो पढ्न आमाबाबु। विशेष गरी, इन्टरनेटमा ग्राहक पुनरावलोकन धेरै मामलाहरुमा ठूलो सहयोग हो।
कसरी हुनेछ डायपर ठीक तरिकाले निलम्बित?
एक-डाइरेक्ट डायपर एक धेरै व्यावहारिक चीज हो र अधिकांश आमाबाबुहरु र शिशुहरु को रोजमर्राको जिन्दगी बाट कल्पना गर्नु पर्दैन। यद्यपि, यो पनि फेरि निलम्बन गरिनु पर्छ र घर भित्र ठूलो गंध बिना सम्भव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। परिवारले इन्कार गरिसकेका कारण यसको लागि उपयुक्त छैन डायपर यसमा। राम्रो एक अलग हो डायपर बाल्टिन, जो वायु-कसुर बन्द गर्न सकिन्छ र यसैले गंध-तंग र अधिमानतः प्रत्यक्ष रूप परिवर्तन गरिएको तालिकाको छेउमा छ। यो सजिलै संग खाली गर्न को लागी अस्वीकार बिन लाई लाग्न सक्छ र डायपर निपटान समस्या पहिले देखि नै हल गरिएको छ।
डायपर खरीद सदस्यतामा
चाहे तपाईं डिस्पोजेबल वा पुन: प्रयोज्य डायपरको लागि छनौट गर्नुहुन्छ, यो तपाईंको बच्चाको साथ रोजगारीको जीवन सजिलो बनाउन मद्दत गर्न महत्त्वपूर्ण हो। खपत धेरै ठूलो भएकोले, विशेषगरी डिस्पोजेबल डायपरको साथ, डायपर सदस्यताले तपाईंलाई थप काम बचत गर्न सक्दछ। जब तपाईं एकै पूरा गर्नुहुन्छ। तपाईं घर मा नियमित डायपर प्याक संग आपूर्ति गरिनेछ र कष्टप्रद टाउको पर्याप्त छैन। त्यसैले तपाईं र तपाईंको सानो प्रेमीले राम्रो तरिकाले नुहाउने समय पाउनुहुनेछ।
अघिल्लो लेखशीर्षक दावी
अर्को लेखस्तन पंप